IINGCAMANGO EZINGAMA-63 EZIPHAMBILI ZETIKI TATTOO- [ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELA SAMA-2021] - UHLOBO
Iingcamango ezingama-60 + eziPhambili zeTiki Tattoo- [Isikhokelo sokuphefumlela sama-2021]
Nangona abantu abaninzi benokunxulumana neentloko ze-tiki ezimdaka kunye nee-cocktails ezingaqhelekanga kunye ne-luau barbeque, la manani abonakalayo abaluleke kakhulu kwinkcubeko yasePolynesia.
Okwangoku kwizithethe ezivela eNew Maori, Samoa, Tahiti naseFiji ukuya kwiiHawaii Islands, inani leTiki linendawo ebalulekileyo kwiintsomi zasePolynesia kunye namabali okudala aba bantu bahlukeneyo. Iinkcukacha zebali ziyahluka kodwa kuzo zonke ezi zithethe uTiki Man kuthiwa yindoda yokuqala eyenziwe ngoothixo abathi emva koko bafumana umfazi wokuqala bahlala emhlabeni.
Nangona kunjalo, isiko kunye nentsingiselo ziye zachazwa gwenxa ngokuhamba kwexesha. Amanani esiwathathela ingqalelo ii-tikis eneneni ahlala ebonisa izithixo ezazisetyenziselwa ukuphawula imida yeendawo ezingcwele.
Ngelixa ukubaluleka kwamasiko kula manani oyikekayo kuhlala kulahleka kutoliko, ziyimbono ye tattoo efanelekileyo yoluhlu lwee-tiki tat yoyilo, okanye i-tattoo yakho yokuqala. Iziqwenga ezikule galari zibonisa indlela etyhila ngayo itatoo yesizwe okanye uphawu lomntu weTiki.
1. Uyilo lweTiki Mask
Umthombo: @ andy_tattoo94 nge-Instagram
Umthombo: @caspianator nge-Instagram
Umthombo: @floweisstattoo nge-Instagram
Umthombo: @ jane_taylor_tattoo nge-Instagram
Iitatto ezimnyama zokugquma phezulu
Umthombo: @ le_labo_d_elo nge-Instagram
Umthombo: @ mattblack187 nge-Instagram
Umthombo: @ p.inkkkkkk nge-Instagram
Umthombo: @senyordosmanuel nge-Instagram
Umthombo: @tatuaggidaclaudio nge-Instagram
Umthombo: @willber_villa nge-Instagram
Umboniso oqhelekileyo wamanani e-tiki uza ngohlobo lwe-mask ye-tiki. Isigqumathelo se-tiki lukhetho olukhulu kumvambo womntu ngenxa yezizathu ezimbalwa, eyokuqala yazo ziintlobo ngeentlobo zamabinzana anokusetyenziswa kwezi bhengezo zinomdla: ukugcuma, ukulila, ukuncwina kunye nokuthetha ngokungagungqiyo konke kunokusetyenziswa kwi-tiki. umvambo.
I-tiki mask tattoo inokusetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo kunye nokusebenzisa iindlela ezininzi njengoko kubonisiwe zezi ziqwenga zibalaseleyo. Umsebenzi omnyama nengwevu kwisithethe sasePolynesia, imibala emitsha yoyilo lwesikolo kunye neendlela zangoku zemveli zinokusetyenziswa kwi-tiki tattoo ngoncedo lwegcisa lomzobi.
2. Ubugcisa bomzimba womlenze weTiki
Umthombo: @ avalan.tattoo nge-Instagram
Umthombo: @nikikutatau nge-Instagram
Umthombo: @nocoastwilly nge-Instagram
Umthombo: @stellaipswitch nge-Instagram
Umthombo: @pellenera nge-Instagram
Umthombo: @robbiebigballs nge-Instagram
Abantu abaninzi bakhetha ukubeka i-tiki tattoo emlenzeni wabo, neziphumo ezilungileyo. Isizathu esinye sokuba abantu abaninzi bakhethe ukubekwa kukobukhulu be-tovas: igcisa le tattoo linokulingana uyilo olukhulu emlenzeni kunezinye iindawo. Iziqwenga zemilenze zikwanika umntu oyisebenzisayo inqanaba elongeziweyo lokuqonda ukuba ngubani owenza kwaye angafumani inki yomntu wokuqala.
Iingcamango zokuyila i-tiki kule ngqokelela zisetyenziswa kwiindlela ezininzi-ezomdabu zaseMaori okanye zePolynesia tattoo yesizwe inyanzelekile-kodwa zonke zibonisa ukuba imifanekiso yetiki ephumeleleyo inokujonga njani emlenzeni.
3. Isandla sikaTiki Tattoo
Umthombo: @deric_zlaff nge-Instagram
Umthombo: @manny_tattooer nge-Instagram
Umthombo: @ochoa_tattoo nge-Instagram
Isimo sengqondo malunga neetattoo sihambe ngendlela ende kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo, nangona kunjalo, ii-tatoo zesandla kusafuneka zinikwe ingxoxo enzulu ngakumbi kuneetattoo kwezinye iindawo. Oko kwathiwa, ezi ziqwenga zenza imeko entle yokufumana i-tiki tattoo ebekwe kwi-smack dab ngasemva kwesandla sakho.
Nokuba umbala opheleleyo we-neo-yemveli okanye womsebenzi omnyama wesizwe ezi zintle ze-tiki tattoo zoyilo zibonisa indlela emnandi ngayo la manani asentsomini abonakala xa ebekwe kwimbonakalo ecacileyo kwisandla somntu onxibileyo.
4. Ubugcisa beTiki yeSleeve
Umthombo: @conrado_levy_tattoo nge-Instagram
Umthombo: @andreabenuz nge-Instagram
Umthombo: @ bara.tattoo nge-Instagram
Umthombo: @drizzy_inkk nge-Instagram
Umthombo: @ eugen.schreiner.stechwerk nge-Instagram
Umthombo: @ shaoki4000 nge-Instagram
Iitattoo zemikhono ezigcweleyo zijike iintloko amashumi eminyaka kwaye ezi uyilo ziphefumlelweyo ze-tiki zibonisa ukuba ziyavuya namhlanje njengoko zazinjalo kwinkulungwane eyadlulayo. Ngelixa kungathintelwanga kwimisebenzi yesizwe, ezi zoyilo zemveli zetiki yasePolynesia zibonisa indlela enyanzelisa ngayo le ndlela ukuba ibe neseyile enkulu njengalo lonke ingalo yomculi onetalente.
Eminye imikhono ye-tiki tattoo ebonisiweyo kule galari isebenzisa umsebenzi ochanekileyo kunye nokuthungwa ngokutyibilikayo ukuze ubambe ngokugqibeleleyo ii-grimaces ezingafaniyo zabalinganiswa ababodwa.
5. Ubugcisa beBracelet Body
Umthombo: @damienandreani nge-Instagram
Umthombo: @masaotattoomaui nge-Instagram
Umthombo: @miquimoko nge-Instagram
Ayinguye wonke umntu ofuna ukunikezela ngengalo yakhe yonke kwi-tiki tattoo kwaye ngombulelo kwaba bantu, izacholo, ibhande lengalo kunye noyilo lwangaphambili lwe tattoo lunokusetyenziselwa ukuvelisa iziqwenga eziphefumlelweyo ze-tiki. Ezi tatto ze-tiki ziyahluka kwisitayile kunye nendlela yazo kodwa zonke zigcina la manani anomdla kwiziko lawo, zenza uyilo lweetiki ezizodwa eziya kuguqula iintloko iminyaka ezayo.
6. Uyilo lweTiki yeTiki yeTiki
Umthombo: @pufftronic nge-Instagram
Umthombo: @suroundedbygiants via Instagram
Umthombo: @tattoosbypatiki nge-Instagram
Olunye uhlobo lwe-canvas oludumileyo loyilo lwe-tiki tattoo lithole. Enye yezona ndawo zincinci ezibuhlungu zokufumana i-inked, abantu abaninzi bakhetha le ndawo ye-tiki tattoo ngenxa yokubonisa okufutshane kwiifutshane kunye naselunxwemeni ngelixa benenketho yokuyigubungela kwizicwangciso zobungcali. Ithole likwayindawo eqhelekileyo kwiitattoo zesiko lasePolynesia ezenza ukuba zifaneleke ngakumbi kwaba bantu babalulekileyo kwiintsomi zasePolynesia.
7. Ubugcisa boMzimba oBuya mva
Umthombo: @bigbeartattooca nge-Instagram
Umthombo: @toshotattoo nge-Instagram
Eyona canvas inkulu emzimbeni womntu, umva lukhetho olufanelekileyo lwezinto ezinkulu, ezintsonkothileyo zokwenza iitattoo kwaye ezi tattoos ze tiki azidanisi. Ukusuka kubucwebe obugcweleyo bomzimba tiki oboniswe ngemibala eqaqambileyo kwimisebenzi emnyama ingubo yokukhanya isetyenziswe kusetyenziswa indlela yemveli yasePolynesia elandela ngokugqibeleleyo imigca yomzimba womntu oyinxibileyo, umva lukhetho olukhulu kwezi zoyilo zinesibindi.
8. Isifuba sePolynesia Tattoo
Umthombo: @ dantzat2 nge-Instagram
Umthombo: @ eliott.guedeu nge-Instagram
Umthombo: @ksutattoo nge-Instagram
Umthombo: @ mons.ink nge-Instagram
Umthombo: @nickblacktattoo nge-Instagram
Enye into enkulu eyenziwe ngelaphu, isifuba sibonelela umculi we tattoo enegumbi elininzi lokolula izihlunu zabo zokuyila kunye nokuvelisa uyilo lweetiki ezonwabisayo. Ngaphakathi kwenkcubeko yasePolynesia, isifuba sikwindawo eqhelekileyo yomsebenzi weetattoo zemveli, zisenza ii-tiki tattoos zifaneleke ngakumbi kwaye zinentsingiselo.
9. Imizobo yemibala
Umthombo: @danskyland_tattoo nge-Instagram
Umthombo: @die_tattoomacherei nge-Instagram
Umthombo: @ inkswell74 nge-Instagram
Umthombo: @kristenprossertattoo nge-Instagram
Umthombo: @laura__barker nge-Instagram
Umthombo: @manuelmathow nge-Instagram
Umthombo: @nahue_cdo nge-Instagram
Umthombo: @ stevenhitchcock3310 nge-Instagram
Umthombo: @tatsbydaran nge-Instagram
Umthombo: @tattoospencer nge-Instagram
Iitattoo zizixhobo zokubonisa okuyilayo kwaye ezi zoyilo zinemibala egcweleyo zibonisa ukuba esi sifundo siguqulela njani xa sisetyenziswa nge-inki yombala odlamkileyo. Uninzi lweetattoo ze-tiki ezikule ngqokelela zithatha indlela entsha yesikolo echazwe ngemibala eqaqambileyo kunye namanani abhaliweyo, nangona uyilo lwenkcubeko yemveli lukwabonakala kwimigca yabo engqindilili kunye nokusetyenziswa kwe-inki yombala.
Umthombo: @livingcanvastattoo2 nge-Instagram
Umthombo: @inkceptionart nge-Instagram
Umthombo: @instabullshit nge-Instagram
Umthombo: @matt_zenbodyart nge-Instagram
Umthombo: @ tiaani.riches_tattoos nge-Instagram
Umthombo: @joshuaflinn nge-Instagram
Igama elithi tiki ngokubanzi libhekisa kwiitotems eziqingqiweyo ezithandwayo ngumxholo we-tiki bar wee-1930 kunye nee-40's, yiyo loo nto kungamangalisi ukuba abantu abaninzi bakhethe lo mboniso uyilo lwabo lweetiki. Ezi ziqwenga zomfanekiso weTiki zisebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuvelisa ubuso okanye umfanekiso ogcweleyo weetiki, nangona iqhekeza elimnyama nelingwevu eligqitywe ngechimpanzee eliyinyani kukuma okuqokelelweyo.
11. Isiqingatha seSleeve Tattoo
Umthombo: @fresh_native nge-Instagram
Umthombo: @otautahitattoo nge-Instagram
Umthombo: @teau_designs nge-Instagram
Enye indawo eyaziwayo kumvambo wesiko lasePolynesia, imikhono enesiqingatha inika umculi wetattoo ngamathuba amaninzi okubandakanya uyilo lweetiki. Iipateni ezicwangcisiweyo zale ndlela yendabuko ye-tattoo zenza ukhuthazo kwindalo yendalo kunye nezikali, iintsiba kunye noyilo lwamagqabi esundu aboniswe apha abonisa indlela eziqhutywa ngayo Iitattoo zesizwe ingayi.
Ngelixa le ndlela inomdla ngokungathandabuzekiyo, ukudityaniswa kwezinye izitayile kunokuba kokonwaba ngakumbi. Ngokubandakanya ukubonakaliswa kweefoto-okwenyani, okumnyama nokungwevu kwentloko ye-tiki equlunqwe zezi patheni zemveli, umahluko onomdla wenziwe othabatha le tattoo inqanaba elilandelayo.
12. Ubugcisa beVintage yaseMelika
Umthombo: @ f1fty1f1fty nge-Instagram
Umthombo: @sydshakti nge-Instagram
I-tattoo yesiko laseMelika yafumana ikhaya eHawaii ngenxa yoomatiloshe kunye nejoni elalime apho nge-WWII. Ngoncedo lwentsomi yomvambo uNorman Sailor uJerry Collins, izinto ezithandwayo zasePacific zasemazantsi zaba ziimpawu zetattoo ezithandwayo, kubandakanya nentloko yetiki.
Ezi ziqwenga zemveli zaseMelika ziyimizekelo emikhulu yesitayile esisebenzisa imigca enesibindi kunye nemibala eqaqambileyo yokugqibezela uyilo lwe tattoo oluphefumlelweyo.
13. IiTattoos zeengalo zeTiki
Umthombo: @claasdobbersteintattoo nge-Instagram
Umthombo: @hendriktattoo_strydomvia Instagram
Umthombo: @zombi_kitsch nge-Instagram
Indawo yeklasikhi yeetattoos, ingalo ephezulu lukhetho olukhulu kuyilo lweetiki. Yeyona ngelaphu enkulu inokubonakaliswa ngokulula okanye igutyungelwe ukuyenza ibe yenye yezona ndawo zidumileyo ze tattoo. Ezi tattoo ze-tiki zisebenzisa i-inki emnyama kunye nombala ukuvelisa imbonakalo yeempawu zalo mlinganiswa ovela kwinkcubeko yasePolynesia nakwintsomi.
Ii-FAQ zeTiki Tattoo
Zimela ntoni iitatoo?
Njengazo zonke ii-tatoo, ukubaluleka kwayo emva kwe-tiki tattoo kuxhomekeke kumntu oyinxibileyo. Oku kuyinyani ngokukodwa kuyilo lwe iconic olunokubaluleka kokutshintsha, nangona kunjalo, isimbo sesiqwengana sinokubonelela ngombono ngokubonisa okunokubakho kulowo unxibileyo.
Uninzi lwabantu lukhetha ukufaka imifanekiso ye-tiki kwiitattoos zesiko lasePolynesia kwaye kwaba bantu intsingiselo ethe kratya yenkcubeko inokuncanyathiselwa kuyilo. Kwaba bantu, i-tiki tattoo yabo inokuthi imele ukutolikwa kwePolynesia kaTiki njengokhokho woluntu.
Umntu one-neo-yesiko le-tiki tattoo ehonjiswe ngeentyatyambo ze-hibiscus kunye izibane ezivuthayo mhlawumbi usebenzisa i-tiki ukumela uthando lwabo kubomi beSiqithi saseHawaii, i-cocktail ye-tropical kunye ne-bar motifs, hayi ukubonakaliswa komntu ovela kwiintsomi zasePolynesia.
Nokuba i-tiki tattoo isetyenziswa njengombhiyozo wenkcubeko okanye ngokulula njengeyilo loyilo ngaphakathi kweetropiki ezinomxholo, obu ubuso be iconic benza ukongeza okuhle kwiitatto kwiindlela ezahlukeneyo.
Ngaba imifanekiso yetiki inethamsanqa?
Kwizithethe zasePolynesia uTiki wayeyindoda yokuqala, eyenziwe ngothuli olubomvu kunye nokutshica, ophiliswa ngoothixo kwaye wabekwa emhlabeni. UTiki ke wamfumana umfazi wakhe kwaye baqhubeka begcwalisa umhlaba.
Ngenxa yendima edlalwa nguTiki njengentsapho yoluntu, ukuboniswa kwakhe kuthiwa ziintelekiso zokuchuma. Kunye nokuba luphawu lokuzala, imifanekiso eqingqiweyo kaTiki ikwajongwa njengethamsanqa kwiinkcubeko ezininzi kwaye lo mbutho umtsalane uye wamkelwa ngokubanzi kwezi zithixo zinomdla.
Kukwafanelekile ukuba uqaphele ukuba, ayingawo onke amanani e-tiki kunye neemaski amele uTiki okanye abanye oothixo kwinkcubeko yasePolynesia. Ngapha koko, ngokwesiko yayiqhelekile into yokuba izigqubuthelo zobuso zibe yimifanekiso yezinyanya ezazisetyenziselwa ukukhusela imimoya emdaka kunye namashwa. Babehlala bebekwa kwiipherimitha zeendawo ezingcwele njengendlela yokugxotha imimoya emdaka kunye nokugcina ubungcwele bezi ndawo zibalulekileyo.
Ukusetyenziswa kwesiqhelo kunika negalelo ekubalulekeni komfanekiso oqingqiweyo we-tiki njengethamsanqa lenhlanhla.
Ngaba uzonwabele ezi ngcamango zeTiki? Ngaba nonke nisetelwe kudash kwivenkile ye tattoo ye-inki entsha? Ukuba ufuna ezinye izimvo ezikhuthazayo cofa kwikhonkco elingezantsi ukuze ufumane iigalari ezothusayo:
Uyilo oluphezulu lweTattoo yoLwandle engama-77
Iingcamango zeTatoo zaseHawaii
Iingcamango ezincinci zeTattoo Ocean
Uyilo lweTattoo yaseJapan
Iifoto zeTattoo zoFuduko lobuhlanga
ITattoo yasePolynesia yengalo
Iingcamango ezingama-89 zobuso beTattoo
Umama kunye nentombi imibono ye tattoo
Iibhokisi ezinkulu zebhokisi zabafana
Indlu yefama yefestile yokuthengisa
imibono ye tattoo kutata wam owaswelekayo
Eyona mibuzo ilungileyo yokubuza intombi